Taliska Nabad gelyada Waddooyinka ee taraafiko oo xusay aas aaska ciidanka booliska – Radio Muqdisho
Taliska Nabad gelyada Waddooyinka ee taraafiko ayaa maanta u dabaal degay sanad guurada 71aad ee aas-aaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo ah 20 bisha December.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta taliska ciidanka taraafikada ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha qaybta nabad gelyada waddooyinka, saraakiil iyo marti sharaf kale.
Taliyaha qaybta nabad gelyada wadooyinka ee gobolka Benaadir Cali Xirsi Barre “Cali Gaab” ayaa saraakiisha ugu hambalyeeyay xuska maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed, isagoo ku dheeraaday ka hadalka waxqabadka ciidanka booliska gaar ahaan kuwa nabad gelyada waddooyinka.
“Waxaan dhamaan hambalyo u dirayaa saraakiisha iyo madaxda ciidanka booliska Soomaaliya iyo inta la shaqeysa oo ku aadan aas aaska maalintan qiimaha badan ee ku beegan sanad guurada ciidanka booliska” ayuu yiri Cali gaab.
Sidoo kale intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa Shahaadooyin lagu doonsiiyay qaar ka mid ah ciidanka nabad galyada wadooyinka.
Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa la aas aasay 20kii December sanadkii 1943 iyadoo maanta si weyn looga xusay guud ahaan dalka 71 guuradii ka soo wareegtay aas aaska ciidanka booliska.